Mividy ny Dredge vaovao i Brookings Harbour, fanadihadiana momba ny raharaha mifehy tena amin'ny fitondran-tena
New Ellicott Brand® Dredge ho an'ny Port of Brookings Harbour any Oregon
Oktobra 27, 2015
Ny Port of Brookings Harbour no mpandraharaha ny dredge vaovao novidian'ny fanjakan'i Oregon hanompo ny seranan-tsambo atsimo avy any Reedsport mankany Brookings.
Ny tompon'andraikitry ny seranan'i Brookings dia nitarika ny fividianana ny dredge ary ny fanjakana dia nisafidy ny seranan-tsambo hiandraikitra ny fiasan'izy ireo eo amoron'ny morontsiraka, hoy i Port Fit Tedgerzgerald.
Ny dredge, marika Ellicott® 360 Swinging Dragon® Dredge, dia ao Bandon amin'ity herinandro ity, manala fako 40,000 metatra toratelo eo amin'ny seranana. Ny dredge vaovao dia hampiasaina hanalana ireo potipoti-javatra toy ny silt, vato, ary slime izay manangona ao amin'ny seranan-tsambo, fitaovana izay matetika manasarotra ny sambo hitety ny fantsakan'ny sambo.
Debris nangonin'ny dredge vaovao tao amin'ny seranan-tsambo Brookings dia hapetraka ao amin'ny toerana EPA izay eo amin'ny làlana 2 kilaometatra.
"Ny fanjakan'i Oregon dia nandeha nitady vola ary nividy dredge," hoy i Fitzgerald. "Ny Coalition West Coast Ports, izay misy ny seranan-tsambo rehetra avy any Reedsport mankany Brookings, dia nanolotra ny hevitry ny dredge any amin'ny Oregon Coastal Caucus."
Ireo mpiasan'ny seranan-tsambo ao Brookings dia nahazo fiofanana ary, amin'izao fotoana izao dia i Brookings irery no mpandraharaha. Farany, hoy i Fitzgerald, ny Port of Coos Bay dia hanofana mpiasa ao amin'ny dredge koa.
"Ny ankamaroan'ny seranan-tsambo hafa dia tsy manana fahaiza-manao mpiasa," hoy i Fitzgerald, "Ary efa manana traikefa izahay."
Nilaza i Fitzgerald fa araka ny filazan'ny Tafika an'ny Engineers, ny seranan-tsambo dia navela hiondrana fotsiny ny volana Oktobra ka hatramin'ny Febroary. Matetika, hoy izy, vanim-potoana tsidihina amin'ny seranan-tsambo ity.
"Ny hevitra dia hoe afaka mandray mpiasa vitsivitsy isika ary mampiofana azy ireo amin'ny dredge, mandritra ny fotoana izay tsy maintsy arahinay ny olona," hoy i Fitzgerald.
Nilaza i Fitzgerald fa rehefa tsy ampiasaina io dredge io dia manantena ny hampiala azy io avy ao anaty rano hitahirizana azy io, tsara kokoa eo amin'ny toerana akaikin'ny asany manaraka. Ny antsipirihany ny toerana hitahirizana ny dredge, hoy izy, dia mbola eo am-panaovana ny asa.
Atombohy amin'ny Ellicott ny Tetikasa Famoronana Port